पशुपतिनगरमा अध्यागमन र प्लान्ट क्वारेन्टाइन सुविधा आवश्यक छ ः प्रमोद राई::local sandesh
पशुपतिनगरमा अध्यागमन र प्लान्ट क्वारेन्टाइन सुविधा आवश्यक छ ः प्रमोद राई
बाबु ललित राई र आमा सन्ध्या प्रधानको कोखबाट वि.स २०२९ पौष ७ गते पशुपतिनगर ८ रुङ्सुङमा जन्मनुभएका प्रमोद राई उद्योग वाणिज्य संघ पशुपतिनगरको वर्तमान अध्यक्ष हुन् । भारतको कोलेम्पोङमा उच्चमावि अध्ययन गर्दै गर्दा राई सन् १९८६ को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समेत सहभागी रहेका थिए । सन् १९८६ मा कालिम्पोङ जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुँदै सामाजिक कार्यमा लागेका उनी जन्मथलो नेपाल आएर पुर्व नवज्योती संघ नामक संस्थापक अध्यक्ष भइ वि.स २०५२ सालमा इलामको इतिहास बोकेको ओमप्रकाश अग्रवाल मेमोरियल गोल्डकपको आयोजना समेत गराएका थिए । तरुण दल पशुपतिनगरको गाँउ कार्य समितीका सभापती चुनिदै हाल आएर नेपाली काँग्रेस पशुपतिनगरको २ कार्यकाल सभापती चुनिएका छन् । सामजिक र राजनीतिक संस्था बाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य, जातिय संघ संस्था, पर्यटन क्षेत्रमा समेत राई उतिकै सक्रिय छन् । प्रस्तुत छ उनै प्रमोद राई सँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
 पशुपतिनगर व्यपारिक क्षेत्रको अवस्था के छ ?
पशुपतिनगर भारतको दार्जिलिङमा आउने पर्यटकको केनमेलको एउटा केन्द्र हो । पशुपतिगनरमा पर्यटकिय क्षेत्र बनाउने धेरै संभावना छन् । दाजिलिङ्ग भ्रमणमा आउने पर्यटकको एउटा केन्द्र भएकाले अहिले पर्यटकको किनमेलको आधारमा पशुपतिनगरको व्यपार धानेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर धेरै पर्यटक आगमन भएमा राम्रो क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।
 पशुपतिनगरमा भारतीय पर्यटकसँगै व्यपारी पनि धेरै आउँथे अहिले कस्तो छ ?
भारत र चीनको सोझै व्यपार संझौता पछि पशुपतिनगरको व्यपारमा ह्रास आएको छ । जति पनि बजारमा आउने सामान दाजिलिङ्गि, सिक्कीमको बजार हेरेर विदेशी सामान आउने गर्छ । त्यसमा अहिले ह्रास आएको छ । किनकी भारतले सिधै चिनसँग व्यपारिक सम्झौता गरेर कतिपय सामान कलकत्ता हुँदै सिलिगुढी आउँछ केही ब्रान्डेड सामान मात्र यो बजारमा आउँछ ।
 पहिले को अहिलेको अवस्थामा फरक के छ ?
भारत–चीन संझौता अघि न्यून गुणस्तर र राम्रो गुणस्तरका सामग्री चिनबाट आयात भएर भारत निर्यात हुन्थ्यो । भारतमा सोझै खरिद बिक्रि नहुने सामग्री पशुपतिनगरबाटै भारतीय बजारमा बिक्रि हुन्थ्यो । सन् २००५ मा भारत चीन सोझो व्यपार संझौता भएपछि कलकत्ताबाट सिधै सिलगढी चिनमा बनेका सामग्री आउन थाल्यो, त्यसैले दाजिलिङ्ग, सिक्कीमको बजार धानेको छ ।
 पहिलाको आर्थिक कारोवारको अवस्था कस्तो छ ?
पशुपतिनगर बजारमा १५ बर्ष अघि धेरै राम्रो कारोबार हुन्थ्यो । भारतिय मुद्रा धेरै भित्रिन्थ्यो । भारतिय बजारमा निर्यात भएपछि स्वःत भारतिय मुद्रा भित्रिन्थ्यो । अहिले भारतिय मुद्रा पाउन धौ धौ छ ।
कारोबार नभएकाले व्यपारी पशुपतिनगर छोड्दै गएको सुनिन्छ नी ?
पशुपतिनगर बजार भनेको चिनबाट सामग्री आयात गरि बिक्रि गर्ने क्षेत्र हो । त्यही भएर पशुपतिगनरमा आएर व्यपार गर्ने देश विदेशका व्यपारी धेरै थिए । जब चिनबाट सोझै कलकत्ताबाट कारोवार गर्न थाल्यो त्यसले गर्दा यहाँको व्यपारमा ह्रास आइरहेको अवस्था छ । व्यपारी धेरैले छोड्दै गएका छन्, अझै छोड्न ेतरखरमा छन् । त्यसैले पर्यटकिय क्षेत्र विकास गर्न सकिएमा यस क्षेत्रको संभावना रहेको छ ।
व्यापारीको स्थायित्वको लागी के गर्नुपर्ला ?
ट्रेड रुट सृजना गर्न नसकेको अवस्था छ,त्यसका लागी भारतका अधिकारीसँग पनि सम्वाद भइरहेको छ । अहिले नेपालमा रहेको भन्सारले कारोबार गर्छ र भारतले रोक्ने कार्य गर्छ । भारतले पनि कारोवार गरी पशु प्लान्ट क्वारेन्टाइनको कार्यालय राखिदिएको अवस्थामा ट्रेड बन्न सक्छ ।
यो क्षेत्रमा भनेको कृषि उपजको धेरै उत्पादन हुन्छ ति सामाग्री काँकडभिट्टा नाकाबाट जान्छ । बाटो अलिक लामो पर्छ अलिक असहज पनि छ कतिपय बस्तु विग्रने अवस्था पनि हुन्छ कृषिजन्य बस्तु सडन सक्छ त्यसैले गर्दा यो नाका छोटो दुरी पर्छ ।पशुपतिनगर नाका खोल्न सक्यो भने व्यपारिको लागत पनि कम हुने व्यापार पनि बढने दुवै देशको आर्थिक श्रोत बढछ ।
इलाम क्षेत्र नम्बर एकमा पशुपतिगनर पर्छ । यो क्षेत्रका संसद प्रधानमन्त्री हुँदा पनी समस्या समाधन भएन त ?
हामीले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन,अध्यागन कार्यालय राख्नका लागि पहलका लागि अनुरोध गरेका छौँ । अलिको पनि संसद झलनाथ खनाललाई पटक– पटक पहल गरिदिन अनुरोध गरिराखेको छौँ । पशुपतिनगर आउने सरकारका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्म सबैलाई हामीले आफ्नो कुरा राख्ने गरेका छौँ । भारतिय राजदुत आउँदा पनि वहाँसँग पनि आफ्नो कुरा राख्यौँ तर समस्या समाधान भएको छैन ।
हालको अवस्थामा चै के पहल भइरहेको छ ?हामीले भर्खरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा ज्ञापन–पत्र बुझाइसक्यौँ । भारतिय जि.टि.ए प्रेसिडेन्ट विमल गुरुङ्गसँग पनि पहल गर्नका लागि ज्ञापन–पत्र बुझायौँ । विमल गुरुङ्गले पनि सकारात्मक लिनुभएको छ । काँग्रेसको दाजिलिङ्गको जिल्ला सभापतिसँग भेट्ने योजना बनाइरहेको छौ । भन्सार प्रमुखसँग कुरो गर्दा व्युरोक्रेट्ससंग कुरो राख्नु भन्नु भएको छ । भारतिय भन्सार, डिएन डिस्ट्रीक दाजिलिङ्गसंग कुरो राख्न पहल गर्दैछौ ।
धेरै पहल भएपनि सम्वोधन पनि भएन नी ?
मुख्यत हाम्रोमा सवै कुरोको अवस्था छ । सुचारु छ भारतमा नभएको र अलिकति चासो भारतिय नागरिकबाट पनि हुनुपर्ने हो । जस्तै छिमेकी मिरिक, सुकिया रामवाङ्गका सर्वसाधारणले पहल गर्दा हुने हो । अलिकति उहाँहरूको पहलको कमी छ ।
पशुपतिनगर दाजिलिङ्गको भ्रमण पोइन्ट पनि हो । यहाँको पर्यटकिय प्रवद्र्धनको संभावना के छन् ?
पशुपतिनगर बजारमा कृषि क्षेत्रदेखी लिएर पर्यटकिय आगमनका लागी भौगोलिक वनावट छ । हालसालै सुचना केन्द्र बनाएका छौ । जुन जिल्ला पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रबाट पहल भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले सहयोग गरेका छौ । त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने जस्तै भित्रिने र बाहिरीने नेपाली पर्यटकहरू पनि आइरहेका छन् ।
दाजिलिङ्ग जाने, पशुपतिनगर आउने उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँको सुन्दरता र उत्पादनदेखी सबै कुरालाई विकास गर्न सक्छौ । भारतका धेरै राज्यबाट घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई यहाँको विशेषताहरू कृषि, पर्यटनमा प्रवद्र्धन गर्न सक्छौ ।
पर्यटन प्रर्वद्धनका लागी सरकारी क्षेत्रबाट के गर्न आवश्यक ?
सरकारी क्षेत्रबाट बास्तविक सहयोग भएको छैन । स्थानिय क्षेत्रबाट पहल भइरहेको छ । पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न वातावरण मैत्री पार्कहरू बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ यहाँ वन क्षेत्र खाली छ त्यसलाई वातावरणमैत्री पार्क बनाउन सके राम्रो हुन्छ । बुद्ध पार्क बन्ने क्रममा छ तिनतले झर्ना छ,त्यसलाई प्रर्वद्धन गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।
नेपाली र भारतका पर्यटक धेरै पर्यटक आउँछन्, यहाँ आउने पर्यटकहरूको धारणा कस्तो छ ?
भारतीय पर्यटकका लागी दाजिलिङ्ग विशेषत मुख्य केन्द्र हो । दाजिलिङ्ग पर्यटन बोर्डले पशुपतिनगरलाई केन्द्र बनाएर १ घण्टामात्र समय दिएको हुन्छ । १ घण्टाभन्दा बढी समय पशुपतिनगरमा घुम्न पर्यटकले चाहेर पनि पाउँदैनन् । किनकी अन्य केन्द्र घुम्ने ठाँउ र समयको कारणले गर्दा यसलाई अलिक प्रर्वद्धन गर्नका लागी दाजिलिङ्ग पर्यटन बोर्डसंग पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।
हामीले दार्जिलिङ पर्यटन बोर्डसँग फराकिलो ढंगले समयको माग गरेर अझ भित्रसम्म घुमाउन पाउने पहल गर्नुपर्छ । पशुपतिनगर आउने पर्यटकलाई पाथिभरा मन्दिर, कन्याम जस्ता रमणिय घुमाउने योजना हो ।
एक घण्टाका लागि भारतबाट पशुपतिनगर छिर्ने पर्यटकको धारणा कस्तो छ ?
पशुपतिनगर एकदमै सफा, सुन्दर वातावरणिय हिसाबका कारण मोडरेट क्लाइमेट राम्रो छ त्यसैले घुम्न आउन मन गर्छन् । सुविधाको कुरोमा मुद्रा सटहीको कुरामा समस्या छ । भर्खरै मात्र सुचना केन्द्र बन्दैछ विस्तारै हुने अवस्था छ । सुचनाको कमीले गर्दा पनि नेपालमा घुम्न नपाएको गुनासो भारतिय पर्यटकको गुनासो छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले संस्थाका गतिविधि के छन् ?
विशेषत सरसफाइको मुख्य समस्या थियो यसलाई व्यवस्थित गर्न लागी परेका छौ । १५÷२० बर्ष पुरानो नालीमा फोहोरमैला थियो त्यसलाई सफा ग¥यौ । प्रत्येक मंगलबार फोहोरमैला व्यवस्थित गर्ने तयारी छ । हालसालै सुर्योदय नगरपालिकासंगको साझेदारीमा १ बर्षका लागी यहाँको फोहोर सुर्योदयको डम्पिङ्ग साइटमा फाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गर्ने काम तपाईहरू आफै गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी निकायबाट सहयोग कस्तो छ ?
सरकारी निकायबाट खासै सहयोग भएको छैन । उद्योग बाणिज्य संघकै पहलमा पशुपतिनाथ मन्दिर बनायौ । सार्वजनिक शौचालय बनायौ । ढल निकास सरसफाइ ग¥यौ । फोहोर व्यवस्थापन अगाडी बढाउदै छौ । सवै कुरा स्थानियबासी र व्यवसायीकै सहयोगले गर्दा सफल भइरहेको छ ।
थोरै मात्रमा भएपनि भारतीय बजारमा पशुपतिनगरबाट सामग्री निर्यात हुन्छ, कस्तो समस्या झेल्नु परेको छ ?
मुख्य समस्या भारतबाट पर्यटक भित्रन्छन्, घुम्छन् कोसेलीका रुपमा केही सामान लाने गर्छन । एउटा गाडीमा ८÷१० जना पर्यटक आएका हुन्छन्,केही कोसेली बेसी हुँदा भारततर्फ लान अफठ्यारो महसुस भइरहेको छ । सरकारको आफनै प्रकारको निती, सम्झौताले गर्दा पनि असहज छ ।
भनेपछि समस्या व्यपारीले झेल्नुपर्ने समस्या यथावत छन् ?
ति समस्या अझ यथावत नै छ । भारतबाट खरिद गर्न आउने व्यपारी र पर्यटकहरूले केही बढी मात्रामा सामान लगेमा एसएसबीले खोसेर राद्यने गरेको पाइन्छ ।
तपाई नेपाली काग्रेस पशुपतिगनरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ स्थानीय क्षेत्रमा दलहरूबिचिको सम्बन्ध कस्तो छ ?
विकासमा कामहरूमा एकजुट छौ । पशुपतिनगरको विकासका लागी सवै राजनितिक दल व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथी उठेर यस क्षेत्रको विकासमा लागी रहेका छौ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य , क्षेत्रमा राज्यले कतिको ध्यान दिएको पाइन्छ ?
आफैमा आत्मनिर्भर बजार नभएको अवस्थाले विकास गर्न गाहो छ । भारतसँग निर्भर रहेकोले स्वनिर्भर हुन जनसंख्या, सेवा सुविधाको कुरो आँउछ । शिक्षा, पानी, बाटो आदीको राम्रो व्यवस्था भएमा जारको पहिचान दिन सकिन्छ । ।
शिक्षाको क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले राम्रो अवस्था छ । केही कमजोरी अवश्य छ । सबै कुरो राज्यले .धान्न नसकेको अवस्था होला ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था नी ?
अस्पताल निर्माण सुरु भएको धेरै भयो तर सम्पन्न नभइरहेको अवस्था छ । पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरो राखिरहेको छौ । धेरै ढिलो भइरहेको छ अस्पतालको भवन बन्न ।
उद्योग वाणिज्य संघका आगामि योजना के छन् ?
विकासका लागी हिजो अस्तिमात्र रानीवन समितीसँग वातावरणमैत्री पार्क बनाउनका लागी कुरो राखेका छौ । केही समय अघि भारतको चेरापुञ्जी जाँदा त्यहाँ वातावरण मैत्री पार्क बनाएको देखेको थिए त्यस्तै संभावना यहाँ पनि छ ।
पशुपतिनगरको विकासका लागि आगामि दिनमा कस्ता काम गर्नुपर्ला ?
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेमा यहाँको आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । पर्यटकलाई घुम्ने ठाँउ भएपनि अहिले संरचना निर्माण भएका छैनन् । पशुपतिनगरमा खेलमैदान नभएकाले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा देख्दा पर्यटकको लागी अध्यागमन कार्यालय जरुरी छ । आन्तरिक÷ वाहय पर्यटनको लागी आवागमनका लागी भारत आउन जान सहजिकरण गर्नुुपर्ने देखिन्छ । तेश्रो मुलुकबाट आउने पर्यटक यो बाटो हुँदै भारत जान नसक्ने अवस्था छ ।
इमिग्रेसन नभएको कारणले ट्रेड को बिषयमा मुख्य समस्या नै छ त्यही हो । यी समस्या समाधान भए ८० प्रतिशत विकासको बाटो खुल्छ । बाँकि हामीले आफ्नो ठाँउको विकास गर्न अरुको मुख हेर्नुभन्दा आफै पहल गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । भएन भनेर हरेस खाएका छैनौँ मेहनतको फल राम्रो हुन्छ सवै एक जुट भएर अघि बढ्छौँ ।
आयोजनाको आसपासमा विद्युतिकरणको काम अगाडी बढाउने तयारीमा छाैँ : दिपेन्द्रराज द्विवेदी
सरकारले तीन कुरामा सहयोग गरे चिया उद्योग तत्काल संचालन हुन्छ : उद्योगी उदय चापागाई
प्रचार भन्दा पनि तिब्र विकासका काम मार्फत समाजवादको यात्रामा छौँ : देउमाई नगरपालिका नगर प्रमुख सूर्य पोखरेल